Spotify wuxuu ku xoog badan yahay suuqa muusikada qulqulka gacan bir ah | Androidsis
Spotify wuxuu ku xoog badan yahay suuqa muusikada qulqulka leh gacan bir ah
Sidii caadada u ahayd seddexdii biloodba mar, dhammaan shirkadaha liiska ku qoran waxay ku dhawaaqaan natiijooyinkooda maaliyadeed. Markii ugu dambeysay ee la sameeyo waxay ahayd Spotify, shirkadda Iswiidhishka ee xukunta warshadaha muusigga ee qulqulaya adduunka oo dhan, runtiina, waa shirkaddii ugu horreysay ee adeegan soo bandhigta 2008.
Sida laga soo xigtay tirooyinkii ugu dambeeyay ee Spotify ay shaaciyeen shalay, shirkaddu waxay u dhaxeysaa dadka isticmaala mushaharka leh iyo kuwa isticmaala nooca bilaashka ah ee 299 milyan ee isticmaalayaasha bil kasta, oo aad uga sarreeya inta kale ee la heli karo. 299-ka milyan ee adeegsadayaasha ah, 138 waxay u dhigantaa isticmaaleyaasha lacag la siiyay iyo inta soo hartay, 161 milyan dadka isticmaala nooca bilaashka ah.
Haddii aan ka hadalno tirooyinka maaliyadeed, Spotify waxay sheeganeysaa in lacagta ka soo xaroota xayeysiinta ay hoos u dhacday 20% marka loo barbardhigo muddadii hore, maxaa yeelay xayeysiiyayaashu waxay joojiyeen maal-gashigii ay ku sameyn lahaayeen xayeysiinta markii ay billaabatay inay xirto kororka fayraska. Tani waa isla xaaladdii saameysay adduunka telefishanka iyo raadiyaha.
Adeegga labaad ee ugu caansan ee soo dejinta muusikada adduunka, Apple Music, wuxuu leeyahay saldhig adeegsadeyaal ah 60 milyan oo adeegsade ah, oo ah sawir laga soo bilaabo Juunyo 2019 Apple aan dib u cusbooneysiin, sidaas darteed waxaa laga yaabaa in jiiditaankii ugu horreeyay ee ka dhexeeyey dhammaan adeegsadayaasha Apple uu si lama filaan ah u joogsaday kuma sii kordhayo sicirka ay qaadi jirtay.
Booska labaad waxaan ka heli lahayn Amazon Music saddexda nooc ee ay u heli karto qof walba: Amazon Music, Amazon Prime Music iyo adeegga muusigga ee qulqulaya oo leh xayeysiis la mid ah kan ay bixiso shirkadda Spotify, oo ah adeeg hadda laga heli karo oo keliya dalal yar. oo aynaan ka helin wax ku hadla Isbaanish.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Spotify wuxuu ku xoog badan yahay suuqa muusikada qulqulka leh gacan bir ah
Sida loo abaabulo amarada kaaliyaha Google sida "Ok, google wuxuu ku damiyaa laydhka 10 daqiiqo"
Motorola VerveBuds 800 ayaa timid Spain. Beddelka ugu wanaagsan ee AirPods Pro?